::Rojgar Manch||Online Newspaper :: Employment Nepal News, Financial Nepal News, Nepal Breaking News, Nepali Latest News, Top Headlines News, National, Political News, Social, Sports, Economy, Business, Health, Entertainment, Nepali Movie, Nepali Music Video and World News, Nepal Bank News, business news, Bank Credit Profit, Sale, Nepal Tourism Year news, Vehicle loan, sale, Nepal Weather एनआरएनए अमेरिकाका पदाधिकारी र सिनेटर क्रुजबीच 'टीपीएस'बारे छलफल:: Rojgar Manch ::
बुधवार, २०७४ फाल्गुन १६ गते २३:००
अमेरिकी सरकारले नेपालीहरुलाई उपलब्ध गराउँदै आएको टेम्पोरोरी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) को अवधि सकिनै लाग्दा गैरआवासीय नेपाली संघ, अमेरिकाले सक्रियता बढाएको छ । उसले पछिल्लो समय टीपीएस नवीकरणका लागि छलफलहरुलाई तीव्रता दिएको छ ।
यहीबीचमा गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद एनआरएन अमेरिकाले सिनेटर ट्रेड क्रुजसँग भेटवार्ता गरेको छ ।
एनआरएन अमेरिकाका अध्यक्ष डा. केशव पौडेलको नेतृत्वमा गएको एक टोलीले नेपालको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै अमेरिकामा रहेका टीपीएसधारी नेपालीहरूमा यसको नवीकरण नहुँदा पर्ने आर्थिक, सामाजिक, मानसिक समस्याबारे सिनेटर क्रुजलाई अवगत गराएको एनआरएनए अमेरिकाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
छलफलका क्रममा अध्यक्ष डा. पौडेलले टीपीएस एक अस्थायी समाधान भए पनि यसको समाधान दीर्घकालीन रूपमा खोज्न सिनेटर क्रुजसमक्ष आग्रह गरेका थिए । पौडेलले टीपीएस नवीकरणले अमेरिकामा रहेका नौ हजार बढी नेपाली परिवारहरूलाई सहयोग पुग्ने जानकारीसमेत क्रुजलाई गराएको भेटमा सहभागी एक एनआरएनएले दिए ।
छलफलका क्रममा सिनेटर क्रुजले भूकम्पपश्चात् नेपालको आर्थिक र नेपाली जनजीवनमा पर्न गएको प्रभावबारे आफू जानकार रहेको र टिपिएस नवीकरणका लागि आफूले सक्दो प्रयास गर्ने वचन दिएका थिए । ‘नेपालीहरूलाई परेको यो समस्याका बारेमा हामी सक्दो सहयोग गर्नेछौं’ क्रुजले दिएको वचन उद्धृत गर्दै भेटमा एक सहभागीले भने ।
अमेरिकाको टेक्सासबाट सिनेटर बनेका टेड क्रुज अमेरिकी सिनेटर भित्रका एक प्रभावशाली सिनेटर मानिन्छन् । रिपब्लीकन पार्टीभित्र पनि कन्जरभेटिभ समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने सिनेटर क्रुज सन २०१६ मा सम्पन्न अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा राष्ट्रपति पदका एक सशक्त उम्मेदवार थिए ।
एनआरएन अमेरिकाका मिडिया कोर्डिनेटर बाल जोशीको संयोजनमा भएको सो बैठकका सहभागीहरूले सिनेटर क्रुजको जुडिसिएल समितिसँग समेत भेटघाट गरेको थियो । सो समितिको प्रतिनिधित्व गर्दै जुडिसियल काउन्सिल क्याथलिन हुंकरले एनआरएन प्रतिनिधि मण्डलसँग भेटी बिनाशकारी भूकम्पले नेपालमा परेको दीर्घकालीन प्रभाव र अमेरिकामा रहेका टीपीएसधारी नेपालीहरूका बारेमा जानकारी लिएका थिए ।
सन् २०१५ मा नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्पपश्चात् अमेरिकी सरकारले नेपालीलाई प्रदान गरेको टीपीएस सुविधा आगामी जुन २४ मा समाप्त हुँदैछ । यो सुविधा नवीकरण नभए झण्डै ९ हजारभन्दा बढी नेपालीहरूले अमेरिका छोड्न बाध्य हुनेछन् ।